Ungalugcina kanjani uhlelo lokupholisa lwe-laptop yethu | Kusuka kuLinux
Ungalugcina kanjani uhlelo lokupholisa lwe-laptop yethu
UCharlie-Brown | | Kunconyiwe, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Kufundwa imibono kokuthunyelwe okubili kokugcina kukazakwabo KZKG ^ Gaara (1 & 2), inkinga ephindaphindayo ivela kubasebenzisi abaningi be-laptop: ukufudumeza iqembu, lapho-ke kuthiwa yenziwa ngoHlelo Lokusebenza abalusebenzisayo. Ngokwazi kwami ​​uqobo, ngiyaqikelela ukukuqinisekisa ukuthi imbangela enkulu yalokhu kufudumeza imvamisa isimo sohlelo lokupholisa lwe CPU, ngaphezu kokusetshenziswa kwe-OS ethile.
Kwesinye isikhathi lapho uxoxa ngalesi sihloko nabanye abantu futhi usikisela ukuthi benze a ukugcinwa kwemishini ukuthola ukusebenza okungcono, bavamise ukuphendula ngokuthi “kepha lokho kuyinkimbinkimbi kakhulu"Noma"Angazi, ukuze ukwenze kufanele ube uchwepheshe onolwazi"noma into enjalo. Ngaphandle kokuyeka ukwazisa umsebenzi wochwepheshe noma ukusho ukuthi noma yimuphi umsebenzi ungenziwa yinoma ngubani, uma ngingalokotha ngithi lo msebenzi owenziwayo, onakekelwa kahle futhi unakekelwe, ungafinyelelwa yilabo abawaziyo ukuphakamisa, kwenzelwa labo bantu engibabhalela lo mhlahlandlela omncane ukuze ngibasize emizamweni yabo.
Okokuqala, incazelo emfushane yalokho i- ifriji uhlelo kukhompuyutha ephathekayo nokuthi isebenza kanjani. Njengakunoma iyiphi ikhompyutha, ilaptop idinga i-heatsink lapho ixhumana ne CPU (futhi kwezinye izimo futhi nabanye chips futhi / noma GPU) lapho kudluliswa khona ukushisa okwenziwa yilezo zinto, okuzobe sekuqedwa ukugeleza komoya okwenziwe ngumlandeli ozovumela izinga lokushisa kwemishini ukuthi lihlale ngaphakathi kwemikhawulo yokusebenza evumelekile. Kwenzekani esimweni sama-laptops ukuthi, ngenxa yezidingo zokwakha, lezi zinto (i-heatsink ne-fan) zincane ngosayizi futhi azihlali zitholakala ngqo ku CPU, futhi abakwazi ukufeza umsebenzi wabo uma bengekho esimweni sokusebenza esifanelekile.
Usinki oshisayo. Kulokhu isebenza ku-CPU nakwenye ingxenye ekhoneni elingezansi kwesokudla
Ngenxa yokucinana kwemiklamo yamanothibhuku, njengomthetho ojwayelekile, izakhi zokuhlakaza Amapayipi okushisa atholakala emaphethelweni angaphandle emishini, eduze kwamapayipi omoya oshisayo, kuyilapho imimoya engena umoya opholile ongaphandle imvamisa ingezansi kwemishini. Ukusuka kulokhu kusatshalaliswa kulula ukuphetha ngokuthi ukuvinjelwa kulawa maphuzu amabili (umoya obandayo noma indawo yokushisa umoya) kubangela ukushisa ngokweqile kwemishini.
1 Izincomo zokusetshenziswa
2 1- Thola iManuwali Yensizakalo yemishini okukhulunywa ngayo
3 2- Qinisekisa ukuthi sinamathuluzi nezinto ezidingekayo
4 3- Lungisa umsebenzi
5 4- Qhubeka nokuhlanza izikhali okokusebenza
6 5- Ukuzihlanza uqobo
7 6- Faka isinamathiseli esisha esishisayo
8 7- Hlanganisa kabusha okokusebenza
9 8- Qinisekisa ukusebenza
Abantu abaningi bathambekele ekusebenziseni ama-laptops abo ukubaxhasa emilenzeni, ukuwabeka embhedeni, izihlalo zezihlalo, amakhushini noma kwenye indawo lapho sinethezeke khona, okwenza izimbotshana zokufaka zesistimu yokupholisa zivinjelwe, futhi kubangele ukufakwa kwendwangu, uthuli, njll. lokho kuzogcina kuqoqana emaphikweni e-heatsink aze enze uhlobo lokuzizwa oluzovimba ngokuphelele ukuphuma komoya.
Ukubuka phansi kweDell Latitude ATG d630. Ngenombolo 6 imbobo yokungenisa umoya yohlelo lokupholisa
Ukugwema lokhu, kuyanconywa beka ilaptop endaweni ebushelelezi futhi eqinile, okungaba yingilazi, ucezu lokhuni noma upulasitiki, okugwema ukuvinjelwa kwemigodi eshiwo ngenhla, ngaphezu kokunikeza indawo ezinzile lapho ungabeka khona okokusebenza; empeleni kukhona amathreyi emakethe okubeka ama-laptops asiza ukuwapholisa, yize ngingeyena umlandeli wokusetshenziswa kwawo.
Yebo, ukungena odabeni manje, uma sizimisele ngokugcina i- ifriji uhlelo yelaptop, lezi yizinyathelo eziyisisekelo okufanele sizilandele:
1- Thola iManuwali Yensizakalo yemishini okukhulunywa ngayo
Njengoba kunengqondo ukucabanga, wonke ama-laptops awafani futhi nenqubo yokuqaqa okufanele ilandelwe ukufika ohlelweni lokupholisa yehlukile njalo, ngakho-ke into yokuqala kuzoba njalo ukuthola Ibhukwana lesevisi kwemishini esizozinakekela. Lokhu kuvame ukulandwa kusuka ku- iwebhusayithi yomenzi ilaptop noma ukwenza usesho enetheni, njengoba kuvame ukutholakala ngaphandle kobunzima obukhulu.
Isibonelo samagama osesho kungaba:
dell + latitude + d630 + »insiza yokusebenza»
Lapho ibhukwana selitholakele, kufanele sifunde ngokucophelela izinyathelo okufanele sizilandele ukufika kufayela le- ifriji uhlelo, thola ukuthi yini ngempela okufanele siyenze esinyathelweni ngasinye futhi singaqhubeki size siqiniseke ngokuphelele ukuthi siziqonde kahle izinyathelo okufanele sizilandele. Ukucacisa ukungabaza singathembela ku- iziqondiso okuvela ku- iFixit futhi nge amavidiyo en Youtube ezichaza lezi zinqubo kwimishini esizoyiqaqa noma kwezinye zochungechunge olufanayo lomkhiqizi.
Ngokwesipiliyoni sami, lokhu kunjalo esinye sezinyathelo ezibaluleke kakhulu futhi ngubani othola ukunakwa okuncane, okudala izinkinga ezinkulu kakhulu; Iseluleko sami, isikhathi 'esilahlekelwa' ngaso kulesi sinyathelo sizosisindisa ekhanda futhi sizisole ngokuhamba kwesikhathi.
2- Qinisekisa ukuthi sinamathuluzi nezinto ezidingekayo
Noma kungabonakala kuyisilima, kufanele siqinisekise ukuthi sine- Izikulufo ezifanele Okwezikulufa zemishini esizoyiqaqa, uhlobo nosayizi wezikulufo kuvela kwi-Service Manual, kepha futhi singayihlola ngokuqhathanisa izikrini nezikulufu. Endabeni yamakhompyutha athile, sizodinga izikulufri "ezikhethekile" ngandlela thile, njengamanye amakhompyutha we-HP. Enye imininingwane esizayo ukuthi sibe nezikulufo ezinethiphu likazibuthe noma siqhubekele kuzibuthe, okuzosisiza ukususa nokubeka izikulufu kalula.
Indlela elula yokwenza uzibuthe ithiphu le-screwdriver ukulihlikihla phezu kukazibuthe. Ngalokhu singasebenzisa odonsa be-hard disk esaphukile esake saziqaqa ngaphambili
Enye into ukuqinisekisa ukuthi sinakho unama okushisayo, okuzodingeka, ngoba uma i-heatsink isusiwe, ngeke sikwazi ukuyifaka futhi uma singafaki okunamathiselwe okushisayo ezindaweni zokuxhumana futhi. Lesi yisinyathelo esingenakuvikeleka, ngakho-ke uma ungenakho ukunamathisela okushisayo, ungacabangi ngisho nokucabanga ngokuqala kokuqaqa. Kulabo abangazi ngokujula, kuyinto etholakala kalula kunoma yisiphi isitolo sezinto zekhompyutha futhi eza ngezethulo ezahlukahlukene nezintengo, futhi okuvame ukuthi kube nemithamo ephansi enamanani amasenti athile anele ngenhloso ehlosiwe.
Sizodinga futhi ezinye amanabukeni noma ucezu lwe indwangu kakotini engenalutho, kanye ne ibhulashi elithambile o ukuxubha (kokubili kuhlanzekile futhi kumile ngokuphelele) ukuhlanzwa
Ekugcineni, ngaso sonke isikhathi kuhle ukuba nakho i-tip forceps enhle njengoba kungenzeka ukuthi siyayidinga ukuphatha ezinye izixhumi ezincane esizothola kuzinto zokusebenza.
3- Lungisa umsebenzi
Lesi sinyathelo siwusizo olukhulu, ngoba uma singenazo izimo ezinhle ezisisiza ukuba senze umsebenzi futhi sizihlele kahle, singaba nzima umsebenzi olula; izincomo zami yilezi: yiba ne itafula lomsebenzi nge ukukhanyisa okwanele, uma kungenzeka, yimboze ngendwangu emhlophe, ube nayo ukukhulisa ingilazi uma singenalo "iso lokhozi" futhi ekugcineni, uma kungenzeka, sibe ne-PC monitor yethu noma enye i-laptop eduze kwethu Ibhukwana lesevisi noma enye into esiyidingayo uma kwenzeka kuba nokungabaza phakathi kwenqubo.
Isincomo sokumboza itafula lomsebenzi ngendwangu emhlophe, yize kungabonakala njengokuncane empeleni akunjalo, ngoba le ndwangu ifeza imisebenzi eminingana: ukuvimbela i-laptop ekushibilikeni kanye / noma ekuklwebheni etafuleni, vimbela izikulufo esizozihamba ukuzisusa ekuzigingqeni, kusivumele ukuthi sizibeke ezikhundleni ezisisiza ukuthi sikhombe indawo yazo ngaphandle kwephutha futhi ekugcineni, sibe nendawo ephikisanayo nombala wezikulufo nezinto ezizosuswa.
4- Qhubeka nokuhlanza izikhali okokusebenza
Into yokuqala okufanele siyenze nqamula ishaja y khipha ibhethri okokusebenza bese ucindezela inkinobho yamandla amahlandla ambalwa, ukuqinisekisa ukuthi akukho mali ekhokhwayo kagesi ezintweni zemishini.
Ungalokothi qala ukuqaqa imishini ngaphandle kokuqala unqamule ishaja bese ukhipha ibhethri
Lokhu kuncishiswa kwezikhali uqobo kufanele kwenziwe ngokulandela ngasinye sezinyathelo ze- Ibhukwana lesevisiUma sinamathela kulezi zinyathelo, akufanele sibhekane nezinkinga. Kuhle ukukhumbula ukuthi, noma kwesinye isikhathi kuyadingeka ukusebenzisa amandla athile ngezikulufo ezithile ezingafuni ukuphuma, uma uma kususwa into ethile sibona ukumelana okukhulu kunalokho okufanele, akufanele siqhubeke "cishe" uma asimi futhi sihlole ukuthi ngabe silandele zonke izinyathelo ngokuhlelekile nokuthi sisuse zonke izikulufu ezibonisiwe. Lapha singaqhubeka nokuxhumana ne- Ibhukwana lesevisi noma enye into mayelana nayo. Imvamisa lokhu kubuyekezwa kuthola iphutha futhi kusivumela ukuthi siqhubeke. Uma kwenzeka inkinga iqhubeka, sisesikhathini sokuhamba ngoba kungcono ukuthi siyeke kunokuba sidale ikhefu okufanele sizisole ngalo kamuva, kepha ngokwami, uma siqikelela futhi sinaka, ukuphucwa izikhali
idlula ngaphandle kwezingqinamba ezinkulu.
Kukulesi sigaba somsebenzi okumele sibe ngaphezulu ihlelekile kunanini ngaphambili, ngendlela eyenza kube lula ngathi ukukhomba indawo yesikulufa nengxenye ngayinye. Esimweni sami esithile, ngivame ukubeka izikulufu etafuleni, ngilandele iphethini efanayo lapho zibekwe khona okokusebenza, ukuze kuthi lapho ziphinda zihlanganiswa, zibekwe endaweni efanayo ezazikhona. Okufanayo engikwenzayo ngezinto ezisuswayo, kufanele sizibeke ngendlela efanayo lapho sizisuse khona futhi sizibeka etafuleni. Lapho siqikelela kakhulu ukuthatha lesi sinyathelo, izinkinga ezimbalwa esizoba nazo lapho sibeka i-laptop ndawonye.
Ezimweni eziningi, esinye sezinyathelo zokungasebenzisi izikhali ku susa ikhibhodikodwa kokuhlangenwe nakho kwami, kuvame ukwanele ukuvele uyisuse endaweni yayo ngaphandle kokunqamula amateyipu ayinamathisela epuletini, engalimala uma iphathwa kabi kaningi. Uma kwenzeka kufanele siyinqamule ngokuphelele, kufanele sinakekele ngokukhethekile kulezi zixhumi.
Embuthanweni, imininingwane yesixhumi seribhodi yekhibhodi
Isinyathelo sokugcina sokuqaqa ukususa i-fan ne-heatsink ukuhlanza zombili, kanye nomsele wokungenisa umoya nezimbobo zawo.
5- Ukuzihlanza uqobo
Nge indwangu o indwangu kakotini ethambile engayikhiphi i-lint, sizoqhubeka nokususa insali yokunamathisela okushisayo okukhona kufayela le- CPU nezinye izingxenye esehlile, kanye ne-heatsink. Kumele siqaphele kulo msebenzi, ngoba sizobe sithinta izinto ezibucayi kakhulu nezibalulekile okuthi uma zonakalisiwe, zenze imishini yethu ingabi nalusizo.
Lapho unamathisela oshisayo usususiwe, sizoqhubeka nokuhlanza i-heatsink, sinake ngokukhethekile amapuleti amancane amise okwe-radiator ezikhona ngqo emgodini ophumayo womsele wokungenisa umoya, ikulezi zingcwecwe ezondile lapho ukungcola kuvame ukuqoqeka khona, kwesinye isikhathi kwakheke uhlobo lomuzwa ovimbela ukujikeleza komoya. Ukuhlanza lezi zinto, singasebenzisa i- ibhulashi elithambile o ukuxubha iphathwe ngokukhulu ukucophelela ukuze ingagobi noma ilimaze lawo macwecwe okuyilawo asabalalisa ukushisa ngokukuhambisa emoyeni ojikelezayo.
Enye imininingwane ukuhlanza amapayipi namaphiko we fan lokho kukhiqiza ukugeleza komoya, ngoba lokhu singasebenzisa futhi okuncane ibhulashi elithambile o ukuxubha, unaka ngokukhethekile fan ezintekenteke impela, ngakho-ke ukusebenzisa amandla akuyona inkethoNoma ukusetshenziswa kotshwala noma enye i-solvent, ngoba kungalimaza i-lubricant fan futhi kunciphise isikhathi sayo sokusebenziseka noma kuphazamise ukusebenza kwayo.
Eminye imishini ine-grill embotsheni yomoya engena engxenyeni engezansi ye-chassis eminyene nothuli, ngakho-ke kufanele siyihlanze ngokuphelele ukuthola amandla ayo okudlulisa umoya ngangokunokwenzeka.
Uma lokhu sekwenziwe, kufanele sihlanze ngokucophelela izinto eziseduze ne-heatsink ne-fan, kwesinye isikhathi futhi eqoqa ukungcola ngoba kusendleleni yokugeleza komoya.
6- Faka isinamathiseli esisha esishisayo
Lapho ukuhlanza sekuqediwe, sizoqhubeka nokufaka isicelo unama okushisayo kulezo zinto lapho sisusa khona okwedlule, okungenani, ku- CPU futhi uma kudingeka, kwabanye chips Mina i GPU uma kwenzeka ukuthi, ngokwakhiwa, i-heatsink ixhumana nezinto ezishiwo. I- inani le-pasta ukufaka isicelo ukwehla kwamamilimitha amabili noma amathathu ububanzi entweni ngayinye. Endabeni ye-CPU, njengoba inendawo enkulu, kufanele beka inani elikhulu noma amaconsi ama-4 2 noma 3 mm isatshalaliswe ngokulinganayo.
Le pasta akadingi hlakazeka, ngoba yilokho i cwila lapho ifakwe endaweni. Ngokwengeziwe, kuhle ukucacisa ukuthi ukubeka inani elikhulu kakhulu CHA izokwenza ikhompiyutha isebenze kangcono, njengoba izogcwala emaphethelweni we-CPU noma izingxenye zayo, futhi ingadala izinkinga kude nokwenza ngcono ukusebenza.
7- Hlanganisa kabusha okokusebenza
Isinyathelo sokuqala kulokhu kuhlanganiswa kabusha kuzohlala kungukufaka kabusha i- fan y cwila, ukwenza isiqiniseko sokuthi ifeni ixhunywe kahle ebhodini. Ngakolunye uhlangothi, inqubo yokufaka i-heatsink kufanele yenziwe ngokucophelela okukhulu, ukuze zonke izindawo ezizopholisa zihlangane nayo. Ukuze senze lokhu, kufanele sikubeke endaweni yayo futhi sibeke izikulufo eziyigcina ngokulandela iphethini ewelekile futhi ngaphandle kokuyiqinisa ngokuqinile ize ibekwe yonke. Uma konke sekukhona, sizoqinisa ngakunye ngokucophelela ngaphandle kokusebenzisa amandla ngokweqile njengoba kufanele sikhumbule ukuthi sisebenza ezintweni ezizwelayo.
Ngaphambi kokuqhubeka, kunjalo kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi fan ifakwe kahle futhi ixhunywe ebhodini
Yonke inqubo yokwakhiwa kweqembu izolandela izinyathelo ezifanayo zokuphucwa izikhali Pero ngokuphambene. Kumele sinake ngokukhethekile ukuxhuma kabusha kahle zonke izingxenye ezazinqanyuliwe, kanye nokubeka isikulufa ngasinye endaweni lapho sasikhona phambilini. Khumbula ukungaphoqeleli noma ukusebenzisa amandla ngokweqile kulesi sinyathelo, ngoba imvamisa, lapho okuthile kungalingani okokuqala, kungenxa yokuthi senze okuthile okungalungile.
Ngaphambi kokuqeda lesi sinyathelo, kufanele sibuyekeze ngokucophelela itafula lomsebenzi qiniseka ukuthi asinazo izingxenye ezisele noma izikriniUma kwenzeka lokhu kwenzeka, seqe isinyathelo noma senze okuthile okungalungile, ngakho-ke kufanele sibuyele emuva size sifinyelele esinyathelweni esesiqedile futhi silungise iphutha.
8- Qinisekisa ukusebenza
Uma sesivele sesifikile lapha, sekuyisikhathi sokubuyisela ibhethri ngaphakathi bese ucindezela inkinobho yamandla. Ngingakuqinisekisa ukuthi uma ngabe siqaphele ngokwanele futhi asizange seqe noma yiziphi izinyathelo noma siphoqe noma yiziphi izinto noma izikrini, i-laptop yethu izosebenza futhi, kulokhu "ipholile" kakhulu kunakuqala futhi izohlala injalo isikhathi eside uma silandela imithetho. izincomo zokusetshenziswa enikezwe ekuqaleni kwalesi sihloko.
Khumbula lokhu umhlahlandlela Akuwona umlingo ozobaqinisekisa kunoma ikuphi ukwehluleka noma iphutha, kepha uma kuwusizo kulabo abaludingayo, noma kunjalo, ukulinga ukwenza lo msebenzi kungumthwalo wabo ophelele, kepha okungenani kimi, kuhlinzeka ukwaneliseka okukhulu lapho ngikwazi ukuqedela ngempumelelo imisebenzi enjengale.
Uma unayo imishini ebhekene nokushisa ngokweqile kungenzeka kakhulu ukuthi kungenxa yokuthi izinkinga neyakhe ifriji uhlelo futhi ungayixazulula ngokulandela le nqubo, ingabe uyalokotha? Futhi-ke, uma uke, wabelana ngomuzwa nawo wonke umuntu, ingabe uyalokotha?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Kunconyiwe » Ungalugcina kanjani uhlelo lokupholisa lwe-laptop yethu
+100 Isihloko esihle kakhulu
Ngiyabonga kakhulu, ngiyethemba kusiza umuntu 😉
Iwusizo kakhulu! Ngiyabonga kakhulu ngalesi sihloko 😀
Ngiyabonga ngokusinda kwakho nangokuphawula kwakho
Futhi kuthiwani ngokusebenzisa elinye lalawo ma-canister omoya ocindezelweyo owathengisayo, ingabe ayasebenza? Ngibuza ngoba ngiqaqe i-laptop yami, futhi ngawabona futhi ngangifuna wona, ngokufanayo uma lawo ma-canister esebenza kahle, ngingawasebenzisa yini ngiyigcine ihlanzekile futhi ngigweme ukuyiqaqa futhi, njengoba bekufanele ngiyidilize ngokuphelele ukuze ngifinyelele ku-heatsink futhi bekungelula neze, ngencwajana yesondlo ...
Angicabangi ukuthi bazosebenza ngaphandle kokuqaqa imishini, yize ingasiza ekuhlanzeni izingxenye eseziqoqiwe kakade. Ngokubona kwami, okusemqoka ukulandela izincomo zokusetshenziswa ezigwema kakhulu isidingo sokufinyelela lapho kudingeka khona ukwenza lolu hlobo lokuhlanza.
Konke kulungile. Le emayelana namakhompyutha wedeskithophu engiwanikelwe ngokungabi nathemba owabuya waphila ngokuhlanza nokuthenga ugesi omusha.
+100 wokuphakelwa kukagesi ... kuyiqiniso ukuthi ngalolo shintsho nje kwesinye isikhathi kungenzeka "ukuvusa" imishini ekhishiwe; kubonakala sengathi "ziyaguga" ngokusetshenziswa. I-LOL
Ngiyabonga ngamazwana nangokuthi ume ...
I-athikili enhle kakhulu, ngivame ukwenza ukugcinwa kokuvikela kuma-PC ami njalo ezinyangeni ezi-3 noma ezi-4
Izeluleko ezinhle kakhulu, ngoba zizongisiza lapho ngenza ukwesekwa ezingeni lehadiwe uma kwenzeka ngiqaqa i-laptop.
Okwamanje, ngiqeda ukufaka i-Office 11 ku-Dell Inspiron 3137 2010 kuzo zombili iWindows 7 neWindows 8 (ngemuva kwefomethi ngenxa yephutha lesendlalelo 8 ngakho-ke i-UEFI edabukisayo ayingivumanga ukufaka iWindows 7).
Ekuqaleni konyaka ngenze ukugcinwa kwe-laptop yami, kuzoba kuye cishe ezinyangeni ezintathu lapho ngizosebenzisa izincomo zakho, i-athikili enhle kakhulu!
Isifundo esihle kakhulu, ukushisa kwi-laptop kuhlale kuyinkinga. Imvamisa ngisebenzisa isisekelo esinabalandeli ukupholisa imishini. Ehlobo umehluko wezinga lokushisa ubonakala kakhulu.
Yebo, ngiyazi ngezisekelo ezinabalandeli, kepha ngibonile ukuthi abaningi bathatha amandla okusebenza kusuka kwi-laptop ye-USB port ngakho-ke banciphisa impilo yebhethri, okuyisizathu esenza ngingathandi ukusetshenziswa kwabo; noma kunjalo, yisixazululo esivumelekile.
Bengingazi ngokunamathisela okushisayo okokuqala lapho ngivula i-pc yami. Ngakho-ke lapho ngiyivula ayikaze iqale, ngisho neBios. Ngize ngabheka ngathola impendulo.
Kwakudingeka ukuthi sisho ukuthi ngaphambi kokuthinta noma isiphi isifunda noma i-transistor, kufanele siqede noma yimuphi ugesi osele ezandleni zethu. Lokhu singakufeza ngokuthinta insimbi lapho sihlangana khona nomhlabathi, noma futhi ngamabhande ohlobo lwesongo abathengisa leyo njongo. 😉
Uqinisile impela ngento yokuqala, njalo khipha ugesi ongaguquguquki ngaphambi kokuthinta noma iyiphi into, leyo imininingwane engihlala ngikhohlwa ukuyisho, isizathu sokukhohlwa ukuthi lapha engihlala khona (eCuba), umswakama omkhulu uhlala uphakeme ( ngaphezulu kwama-60%), ngakho-ke kunzima kakhulu ukuthi ugesi we-static unqwabelane; Kunoma ikuphi, ngiyabonga kakhulu ngesiginali esifike ngesikhathi nangokudlula lapha.
ULuis Montes kusho
Sawubona, nginguchwepheshe wekhompyutha futhi njengomphelelisi walokhu okuchazayo (okuyindlela, kuphelele impela) ngibona kunesidingo sokuqokomisa amaphuzu athile noma yimuphi umsebenzisi ozama ukwenza lolu hlobo lomsebenzi okufanele awabheke, hhayi ngoba izwakala iphindaphindeka, kepha ngoba empeleni ibaluleke kakhulu:
1 NJALO kusebenza ungaxhunywanga; okungukuthi, ayikho ibhethri nekhebula le-AC elixhumekile. Ukwenza amandla kazibuthe ngezandla zakho ngokuthinta indawo yensimbi ukuvimbela okungalimazi.
2. Zama ukuqaphela lapho wehlisa ilaptop, gwema ukwephuka futhi ungadidanisi ezinye izikulufu nezinye. Icebo elilula lokuthola ukuthi isikulufa sivelaphi ukusifaka ngentambo eceleni komgodi lapho sivela khona.
3. Uma ungenakho okuhlangenwe nakho noma ukuthi kungenzeka usebenzise i-air compressor, sebenzisa umoya onomfutho osemathinini, othengiswa ezitolo zehadiwe nasezitolo ezinkulu. Khumbula ukuthi kufanele uzame ukususa ukungcola, hhayi ukukucindezela kumasekethe.
4. Uma ngemuva kokuhlanza abalandeli, benza umsindo ocasulayo, ubashintshe ngaphandle kokungabaza. Ezisekelweni ezisemthethweni zohlobo lwe-laptop yakho ziyatholakala. Ungazami ukugcoba i-shaft noma ungeze uwoyela, ukujikeleza kwe-fan kungasabalalisa uwoyela ngamasekethe angaphakathi.
5. Njalo sebenzisa igama lomkhiqizo unamathisele okushisayo. Ama-brand amahle yi-Arctic silver 5, Cooler Master fusion extreme, izixazululo ze-Gelid, Prolimatech, njll. Uma ungabaza ukuthi iyiphi ozoyisebenzisa, kuhle njalo ukubuza umngani we-overulser (omunye walabo bantu abathanda ukuphoqa ama-CPU abo ukuthi athole ukusebenza okwengeziwe).
I-PS: nokwenza uzibuthe isikulidilayiva ngokuzihlikihla kuzibuthe, kusebenza kuphela uma uyihlikihla kolunye lwezigxobo zayo, hhayi uzibuthe wonke.
Phendula uLuis Montes
Sawubona Luis, ngiyabonga kakhulu ngezichasiselo zakho, esimweni sephoyinti 2 kubonakala kungumbono omuhle, ngicabanga ukuthi kusukela manje ngizoqala ukukusebenzisa. Mayelana nephuzu lesi-4 uqinisile impela, ukuzama ukugcoba umlandeli kungaba ngumthombo wezinkinga ezinkulu, kuyanconywa ukuthi ungene esikhundleni sakho noma nini lapho kungenzeka khona. Mayelana nodaba lomkhiqizo wokunamathisela oshisayo, kuze kube manje ngisebenzise eziningana zazo futhi angikaze ngibone umehluko omkhulu, kunoma yikuphi, ukukhawulwa kusebenza uma nje sinethuba lokukhetha; okwenzekayo ukuthi kwesinye isikhathi leyo nketho ayitholakali nje.
Ngiyabonga kakhulu ngokuphawula kwakho nangokuma ...
Indatshana enhle! Halala, Charlie!
Ngiyabonga kakhulu ngokudumisa kwakho uPablo, ngizama kuphela ukuhambisana nalokho okushicilelwe kusayithi. Inganga yakho…
Into ephelele! Ngiyabonga kakhulu ngokuchaza yonke into ngemininingwane enjalo futhi iqondakale kubantu nje!
Ngicabanga ukuthi izikhathi eziningi sikhononda ngokushisa okunikezwa ngamakhompyutha ethu ngaphandle kokucaca kahle ngesizathu salokho kushisa. Sinabo embhedeni, ezindaweni ezingaphefumuli kahle futhi nomlandeli oshayeke kakhulu kunethuna likaTutankhamun.
Lapho ngikwazi ngizokusebenzisa. Ngibonga kakhulu!
Ngiyabonga uTesla, yingakho nje ngigxile kakhulu kuzincomo zokusetshenziswa; Uma sithatha izixwayiso ezifanele, sizokugwema ukwenza lezi zondlo kaningi.
Iposi elihle mngani.
Ngiyangeza, lokho ukupholisa kahle, uma kwenzeka kunikeza izinkinga zokupholisa, njengoba kwenzeka ngeDell XPS M1530, ngifaka ipuleti lethusi eliphucuziwe kahle kanye nobukhulu bohlamvu lwemali kuma-chipset amathathu anayo kuleli cala. Futhi, unamathisela okushisayo phakathi kwabo ne-heatsink.
Elinye iphuzu, yize lokhu kweqisa kakhulu, ukusika umugqa wenzwa yomlandeli, ukuze umlandeli agcwale lapho uvula. Futhi ekugcineni, susa isiponji esilethayo noma isihlungi somoya siletha ama-laptops amaningi, ukuze umoya oshisayo uphume ngokunethezeka kakhulu ngakho-ke, izinga lokushisa lizokwehla kakhulu.
Kumele ngithi, ngalokho kusethwa, ngenze le khompyutha yehle isuka kuma-degree angama-80 yaya kuma-40 degrees Celsius ngaphandle kwenkinga, futhi ihlala lapho. Kukhuphuka kuphela ezimeni lapho ngizama i-emulator enamandla kakhulu, njenge-MAME ngomdlalo osindayo noma lapho ngihlanganisa i-kernel, kepha ngokujwayelekile, ifeni lihlala lingenzi lutho futhi izinga lokushisa lingemukeleka kimi ngaphansi kuka-45 ama-degree anesilinganiso sesikhashana. 30-okuthile.
Ngiyabonga ngemibono yeNauTiluS, kepha okungenani angilokothi ngikhuthaze noma ngubani ukuthi afinyelele kuzinyathelo ezeqisayo njengokusika umugqa wenzwa yokushisa, imvamisa kwanele ukuguqula imingcele yokusebenza yomlandeli ku-BIOS. Ngakolunye uhlangothi, leso "siponji" osikhulumayo, ngokwazi kwami, ASISONA isipanji noma ingxenye yemishini, kumane nje kungohlobo oluthile lokuzizwa olwakhiwa ukunqwabelana kwendwangu yendwangu, njll. ekuphumeni komsele wokungenisa umoya, njengoba ngishilo ku-athikili, ngakho-ke noma nini lapho sibona into enjalo, kuyadingeka ukuyisusa njengengxenye yokuhlanza.
Ngempela ... isiponji sinqwabelene izinwele nelineni ... ngaphezu kwalokhu ngivumela ukuphawula okuncane ... ngincoma ukuthi sibe nokukhanya okuningi ngangokunokwenzeka endaweni yokusebenza ... lokhu ngoba izikhathi eziningi lapho siqaqa ilaptop kunezinto ezingabonakali ekubukweni okulula kangaka ... ngaphezu kwalokhu uma kungenzeka ukubeka ikhamera yedijithali ukurekhoda okwenzayo kuyanconywa futhi .. ngakho-ke uma kamuva umsebenzisi engakhumbuli ukuthi kanjani noma lapho okuthile kuhamba khona, ividiyo ingamsiza ... ngaphezu kwamazwana akho ekusebenziseni ngilinganisela okuthile ... ukwehluleka okuningi kuma-laptops kungenxa yezindlela ezingafanele zokusebenzisa ... umsebenzisi angazazi ... futhi kungaba isihloko sokuthunyelwe okungeziwe
Ngempela, akukho siponji ... ukungcola okumsulwa. Ngokuqondene nokukhanyisa, kubalulekile, uma kungenjalo sizodlula emsebenzini omningi futhi sigcine sikhuphuka. Umqondo wokuqopha inqubo kuvidiyo ubonakala muhle kakhulu kimi, futhi kungasiza ukuthatha izithombe esinyathelweni ngasinye futhi ngaleyo ndlela ube nomhlahlandlela obukwayo wanoma yimiphi imibuzo. Ngivumelana nawe ukuthi ukwehluleka okuningi okusolakala ukuthi kwenziwa kuma-laptops kungenxa yokusetshenziswa ngendlela engafanele, ngakho-ke qhubeka ubhale ngokwakho isihloko, khumbula ukuthi iminikelo yamukelekile.
UFco Javier kusho
Ama-laptops ambalwa anesihlungi se "siponji", futhi akusiwona ukungcola, ungazihlanyi ngengane. Njengesibonelo i-Acer Aspire.
Phendula uFco Javier
Isikhathi sokuqala lapho uqaqa i-laptop yakho, kuhlala kunezikulufo ezisele noma iphedi yokuthinta iyeka ukusebenza i-hajahjajh xD, kepha kuyiqiniso lapho kutholakala khona umlandeli, kwakheka inani elikhulu le-lint, uthuli, njll.
Kuyiqiniso ukuthi uthuli nelineni kubangela ukushisa kakhulu futhi ngenxa yalokho ukwehlisa ikhompyutha nezikhathi eziningi ukuphepha, ama-laptops azicisha wona ukugwema ukulimala kumasekethe awo.
Futhi yingakho kubaluleke kakhulu ukwenza ukuhlanzwa ngokomzimba kwemishini, NGIHLALE NGENZA UKUNCOMA UKUVIKELWA KOKUVIMBELA, kepha abantu abaningi abasinaki lesi sexwayiso, ngoba ngale nsizakalo amakhompyutha agcinwa esesimweni esihle.
Futhi njengoba besho laphaya kungcono ukuphepha kunokuzisola hehehehe.
Kuhlelwe Umlawuli: Imibono emibili ethunyelwe nguwe iqukethe izixhumanisi zokuphromotha zebhulogi yakho. Leli sayithi akulona elokuthi uziphakamise. Ngiyethemba niyaqonda.
Amaphuzu we-Article 20 amahle kakhulu!
Bengihlala ngizibuza ukuthi kungani ilaptop yami ibanga umsindo omkhulu kunemoto esemgwaqweni omkhulu, manje sengiyazi, i-athikili enhle kakhulu, ngizozama ukukusebenzisa, ukubona ukuthi ngisele nezikulufo ezingaki. : p
Nika, incwajana yami esikhathini esithile esedlule, ibikuma-degree angama-80 ngaphandle kokwenza lutho, bengicabanga ukuthi umthombo we-shit noma izinkinga ngokunamathisela okushisayo (ngiyithumele kuchwepheshe, bengingafuni ukuyiqaqa ngoba ngigcine ngiqaqe incwajana ngemuva kwalokho angizange ngikwazi ukuyibuyisela emuva i-xD hahaha), umfana uqale wacabanga ukuthi kuyamangaza ukuthi kwenzekeni kuye, wacabanga ukuthi umthombo awunikeli amandla kagesi afanele, ngesonto banginika lona futhi bangitshela ukuthi ngaphambi kokukhokha, ukuzama, ngoba bahlanze yonke into (inenhlabathi eningi) futhi umshini waqala ukusebenza kahle, kuze kufike lapho umfana ethi angizame khona isonto noma amabili uma konke kuhamba kahle, ngikhokhe, ngoba iqiniso ukuthi asenzanga lutho kulo, silisulile nje manje ngibhala lokhu (okumangazayo):
[x11tete11x @ Jarvis ~] $ izinzwa
I-adaptha: Idivayisi ebonakalayo
i-temp1: + 49.0 ° C (crit = + 96.0 ° C)
I-Adapter: i-adapter ye-ISA
I-id yomzimba 0: + 50.0 ° C (okuphezulu = + 86.0 ° C, crit = + 100.0 ° C)
Okuyinhloko 0: + 50.0 ° C (okuphezulu = + 86.0 ° C, crit = + 100.0 ° C)
Okuyinhloko 1: + 43.0 ° C (okuphezulu = + 86.0 ° C, crit = + 100.0 ° C)
Okuyinhloko 2: + 50.0 ° C (okuphezulu = + 86.0 ° C, crit = + 100.0 ° C)
Okuyinhloko 3: + 47.0 ° C (okuphezulu = + 86.0 ° C, crit = + 100.0 ° C)
i-temp1: + 50.0 ° C
[x11tete11x @ Jarvis ~] $ isikhathi sokuphumula
* Nginikeza ukholo ebengifuna ukubhala i-xD
HAHAHA… Ngikhathazekile ngalowochwepheshe wakho ukuthi uma eqaqa izincwadi zakho unezinkinga zokuzihlanganisa .. HAHAHA bengingeke ngimnikeze ukuthi alungise ngisho nendawo yokuthengisa… Ngiyethemba uzodlulisela isixhumanisi salokhu okuthunyelwe ku- « uchwepheshe », HAHAHAHA ...
Lapho ngiphinda ngiphawula, ngazwakalisa kabi i-xD, ingozi yimina xD, phambilini ngangiqaqa incwajana futhi angibange ngisakwazi ukuyithanda futhi, yingakho ngiyithumele kochwepheshe (kusuka ekusekelweni okusemthethweni kwencwajana yami xD) hahahahaha
Indatshana enhle kakhulu. Ngenxa yendatshana yakho, ngibe nesibindi sokuhlanza i-notebook yami i-100% (Samsung R480), ngithenga unamathisela kanye neziphuzo ezithile zokuhlanza ukususa unamathisela oshisayo onazo izingcezu (i-ArctiCleans Thermal Material Remover) bese ngisebenzisa okunamathiselwe okushisayo (i-Arctic MX-2) . Ushintsho lubonakala ngokushesha, uma lubasiza kakhulu obekunzima kakhulu kwakuyitimu yekhibhodi, ngoba inyunyana yokuzwela kakhulu kuzixhumi zayo, kepha ngiyilawule :). Uhlelo lwami manje alushisi ngokweqile sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo !!! !!!, kodwa kuyinto ezinama-Samsung Notebooks amadala anayo, ngakho-ke kufanele uhlale nazo. Kepha kusobala ukuthi ukuhlanzwa kukhonze kakhulu. Ngiyayithokozela futhi indatshana yakho futhi ngiyalindela !!!, Ihlala ingcono kakhulu !!
Sawubona Sebastián, ngijabule kakhulu ukuthi le ndatshana ikusizile futhi uzokhuthazwa ukuba ugcine incwadi yakho yokubhalela, futhi wabelane ngolwazi lwakho nomphakathi, okunikela kokuthile kithina sonke; okungenani umane angazise ukuthi kunemikhiqizo yokuhlanza unamathisela oshisayo. Ngokuqondene nama-laptops amadala akwa-Samsung, kuyiqiniso ukuthi "ayashisa" kancane kepha noma kunjalo, ukugcinwa kuyasiza ngaso sonke isikhathi.
Siyabonga ngokuma futhi wabelane ngolwazi lwakho ...
Sawubona Sebastian. Ngiyakwazi ukuphawula kwakho iminyaka emibili, kepha ngiyazama ukuqaqa i-Samsung R480 yami futhi anginayo ibhukwana lesevisi. Uma ubona isicelo sami, ungangisiza? Ngiyabonga!
I-laptop enginayo ineminyaka engaphezu kwengu-10 ubudala futhi njalo uma ngiyivula kufanele ngilinde eminye imizuzu engu-15 ukuze ifudumale. Inokulungiswa, kepha inkinga ayixazululwa.
Ngakho-ke ngine-laptop isikhashana.
Phendula ku-Soy Paquito
Faka isihloli sesipelingi nohlelo ku-LibreOffice / OpenOffice